Feerooyinka ku jira suugada biirka, hodanka ah ee sahlan in la diyaariyo. | Cunnooyinka jikada
Feeraha maraqa biirka
Montse Morote | | Galitaanno Kulul, Cunnooyinka Hilibka
Feeraha maraqa biirka. Yaan jeclayn feeraha doofaarka qaarkood? Hagaag, kuwan suugada biirka aad ayaad u jeclaan doontaa, waa saxan fudud oo la sameeyo iyo natiijooyin aad u fiican, waa kuwo aad u wanaagsan, jilicsan oo casiir leh oo leh suugo roodhida lagu dubay.
ka feeraha ayaa aad u casiir leh iyo waliba hilib dhaqaale, taasi waa sababta aan u diyaarin karno suxuun wanaagsan oo aan qarash badan ku bixin.
LFeeraha doofaarka ee biirka Waa saxan aan horay usii diyaarin karno, waxaan ka diyaarin karnaa maalin ilaa maalinta xigta, saxan oo ay wehelin karaan xoogaa baradhada la shiilay, khudradda, boqoshaada mushrooms.
Hab kale oo loo diyaariyo feeraha, iyadoo leh maaddooyin yar oo qoyska oo dhami jeclaan doonaan.
Nooca cuntada: Carnes
Waqtiga diyaarinta: 15 m
Waqtiga karinta: 30 m
Wadarta waqtiga: 45 m
1 kiilo feeraha doofaarka
2 xabo oo toon ah
1 qasac oo biir ah 330ml.
Si loo diyaariyo feeraha sooska biirka, marka hore waxaan nadiifinaynaa feeraha, waxaan u kala jarjaraynaa qaybo yaryar, xilli basbaas iyo milix ah.
Digsi waxaan ku dari doonaa diyaarad wanaagsan oo saliid ah markay saliidu kulushahay, bunni feeraha kuleylka badan, ilaa ay ka noqdaan bunni dahab ah.
Iska jar basasha iyo toonta, markii feeraha ay dahab yihiin ku dar basasha.
Waan walaaqeynaa oo waxaan ka tagnaa dhowr daqiiqo si wax walba loo wada karsado oo basasha loo qaawiyo iyadoo la raacayo iyadoo lagu darayo toonta la shiiday.
Wax walba ku kari daqiiqado, ku dar biirka, u oggolow aalkoladu inay uumi baxaan daqiiqado oo ku dar koob yar oo biyo ah, milix yar oo u kari ilaa 30 daqiiqo.
Waqtigaan ka dib waxaan dhadhaminaa cusbada, hubi in feeraha ay jilicsan yihiin, saxaan oo damiyaan.
Waxayna diyaar u noqon doonaan inay wax cunaan !!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Asxaabta » Galitaanno Kulul » Feeraha maraqa biirka
Baradhadu jiis iyo hilib doofaar
Salad digaag leh salmon, avokado iyo baradho macaan